Boeing ayaa 10 milyan oo doolar ugu yaboohday jawaabta Hindiya ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Boeing ayaa 10 milyan oo doolar ugu yaboohday jawaabta Hindiya ee COVID-19
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Boeing waxay ku dhawaaqday $ 10 milyan oo gargaar deg deg ah oo loogu talagalay Hindiya
Caawinta Boeing waxaa lagu hagaajin doonaa ururada bixiya gargaarka
Kooxda Boeing ee dalka Hindiya waxay tiradoodu dhan tahay 3,000 oo shaqaale ah
Shaqaalaha Boeing waxay sidoo kale shaqsi ahaan ugu deeqi karaan hay'adaha taageeraya gargaarka COVID-19 ee Hindiya
Boeing ayaa maanta ku dhawaaqday $ 10 milyan oo gargaar deg deg ah oo loogu talagalay Hindiya si ay u taageerto wax ka qabashada dalka ee kor u kaca hadda ee kiisaska COVID-19. Caawimaadda Boeing waxaa lagu hagaajin doonaa ururada bixiya gargaarka, oo ay ku jiraan sahay caafimaad iyo daryeel caafimaad oo degdeg ah oo loogu talagalay bulshada iyo qoysaska la dagaallamaya COVID-19. Kooxda Boeing ee Hindiya waxay tiradoodu dhan tahay 3,000 oo shaqaale ah, marka lagu daro macaamiisha maxalliga ah ee qiimaha leh, alaab-qeybiyeyaasha, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga.
“Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu baabi’iyey bulshooyinka adduunka oo dhan, qalbiyadeenuna waxay la hadlayaan saaxiibbadeen Hindiya oo soo maraya waqti aad u adag. Boeing waa muwaadin caalami ah, Hindiya waxaan ku toosineynaa jawaabteena masiibada ah bulshooyinka sida aadka ah ay u saameeyeen kiisaskan soo kordhay dhowaan, ”ayuu yiri Dave Calhoun, madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee shirkadda The Boeing.
Boeing waxay la kaashan doontaa ururada maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah gargaarka si loo geeyo $ 10 milyan meelaha ugu baahida badan iyadoo la tashan doonta khabiirada caafimaadka, dowlada iyo bulshada.
Shaqaalaha Boeing sidoo kale waxay fursad u leeyihiin inay shaqsi ahaan ugu tabarucaan ururada samafalka ee taageera gargaarka COVID-19 ee Hindiya. Iyada oo qayb ka ah barnaamijka Boeing Gift Match, shirkaddu waxay la mid noqon doontaa tabarucaadka lacageed ee dollarka ah, iyada oo kordhin doonta gaadhista gargaarka la siinayo dadka Hindida ah.
"Boeing kaliya uma taagna midnimada shacabka Hindiya dadaalkooda ku aaddan la dagaallanka cudurkan faafa, waxaan qayb ka noqon doonnaa xalka," ayuu raaciyay Calhoun. "Waxaan sii wadi doonnaa kormeerka jawaabta faafida ee Hindiya waxaanna ka shaqeyn doonnaa inaan taageerno shaqaalaheena, macaamiisheenna, iyo la-hawlgalayaasheenna dhibaatadan."
Joogitaanka Boeing ee Hindiya wuxuu sii fidayaa in ka badan toddobaatan sano wuxuuna ka kooban yahay shirkadda Tata-Boeing ee wadajirka ah, taas oo soo saarta qaybo iyo qaybo waaweyn oo loogu talagalay wax soo saarka guud ee shirkadda. Kaqeybgalka bulshada deegaanka Boeing ee India waxay si togan u saameyneysaa in ka badan 300,000 oo ku nool gudaha dalka iyada oo loo marayo maalgashiyada waxbarashada, caafimaadka iyo fayadhowrka, horumarinta xirfadaha, iyo barnaamijyada wacyigelinta.